Waxaa jira siyaabo badan oo aad ku maqli videos music free online on Shabakadaha. Bal aynu eegno ah ee videos music Shabakadaha internetka u dhagaysto music. Read More >>
Posted by Thomas Jones | 17.11.2015
Artile ayaa ku tusi sida ugu wanaagsan si ay u gudbiyaan music u dhexeeya qalabka macruufka ama u dhexeeya qalabka macruufka iyo computer. Read More >>
show article aad siyaabo badan u kala iibsiga ee music ka iPhone iCloud. Read More >>
Ka dib markii lagu casriyeeyo Lugood Library, heli Lugood playlist waayay? Just bartaan talooyin & tricks si uu u xaliyo tan playlist Lugood dhibaato ka maqan. Read More >>
Ma la kulmeen dhibaatooyin ka kala wareejinta music ka iPod taabto si Lugood? Halkan hab sahlan oo aad isticmaali karto si ay u sameeyaan si fudud. Read More >>
Cloning drive Hard sidoo kale loo yaqaan cloning disk waa hab ama koobi by iyaga oo intaa ku daray in file ah image ka ​​kooban yahay mid drive ay adag tahay in kale. Geedi socodka sidoo kale la fulin karo si toos ah uga Read More >>
A shil gaari ku adag yahay marka drive adag shaqada joojin, waxaa buriyay awoodin fulinta hawlaha ay sida caadiga ah halka laga badiyay dhammaan xogta ku yaal. Drive A adag burburi karaan ay sabab u tahay tiro balaadhan oo ah sababo Read More >>
Sidee baad u bogsan xogta ka wadid aad u adag in aad laptop? No, uma baahnid inaad si loo eego sida caadiga ah aan sidaa yeelno, markii aad laptop waxaa ka shaqeeya ganaax. Si kastaba ha ahaatee, waxa haddii aad ogaato in laptop ayaa joojiyay Read More >>
NTFS, oo waxay u taagan tahay File System New Technology, waa nidaam file a in la horumariyo by Microsoft ee 1993. Waxaa meesha baruurta iyo File System qaab High qaaday. NTFS ayaa impro farsamo dhowr Read More >>
Halkan liiska sababaha ugu fiican sharaxaad ka bixisay sababta ay u JAILBREAK aad iPhone ama waxaa laga yaabaa in laga yaabaa in aanay noqon in ay wanaagsan fikrad. Read More >>
Haddii aad mar dambe ayaa xiiseyneysa, raaxo ama kaliya aad dooneyso inaad kordhiso gaarka ah, waxaad had iyo jeer kala cadeeyo kartaa lambarka telefoonka internet oo gebi ahaanba. Read More >>